Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1 1.4.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1
ဗားရွင္း 1.4.2 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ပညာေရး Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1
Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1 ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Ohayou app enables you to practice Japanese listening and study JLPT (N5, N4, N3, N2, N1 tests) withafew clicks on your mobile phone. We provide over 1,000 high-quality sound tracks by native speakers, Japanese scripts, click-to-translate dictionary and powerful audio player to help you practice Japanese listening tests in the most efficient way.
We are constantly adding new textbooks every month. If you like us, please support us by purchasing removing ads or full access rights to view scripts in Ohayou store.
Ohayou app ကိုဂပြနျနားထောငျလေ့ကငျြ့နှင့်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာအနည်းငယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကလစ်အတူ JLPT (n5, n4, N3, n2, N1 စမ်းသပ်မှုတွေ) လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂျပန် script များ, ဇာတိပီအားဖြင့် 1000 ကျော်မြင့်မားသောအရည်အသွေးအသံပုဒ်များကိုပေးစွမ်းကလစ်နှိပ်ပါ-to-ဘာသာပြန်ဆိုအဘိဓါန်နှင့်အစွမ်းထက်အသံကစားသမားသင်အများဆုံးအကျိုးရှိစွာလမ်းအတွက်ဂျပန်နားထောင်ခြင်းစာမေးပွဲများလေ့ကျင့်ကိုကူညီ။
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်လစဉ်လတိုင်းအသစ်ပြဌာန်းစာအုပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက, Ohayou store မှာ script များကြည့်ရှုရန်မဖယ်ရှားကြော်ငြာသို့မဟုတ်အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုဝယ်ယူအ​​ားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပါ။
သငျသညျတိုးတက်မှုများအတွက်မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါက support@ohayouapp.com မှအီးမေးလ်အခမဲ့ခံစားရသည်။
Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1 အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1 အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 6.69k 3.7M
Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1 ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1 အခ်က္အလက္
App Name: Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1
Release date: 2018-12-10 09:13:28
လက်မှတ် SHA1: 4D:75:D0:14:06:23:D3:AE:F4:A7:B4:4F:F0:BC:33:05:8F:F5:84:D8
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Chensong Chen
အဖွဲ့အစည်း (O): Ohayou
နိုင်ငံ (C): HK
Ohayou - JLPT Listening Tests N5 N4 N3 N2 N1 APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ